Ungazisebenzisa njani iiNqaku zeTayitile ye-SEO (Ngemizekelo)
Ungazisebenzisa njani iiNqaku zeTayitile (Ngemizekelo)
Lwesine, Matshi 24, 2022 Lwesine, Matshi 24, 2022 Douglas Karr
Ngaba uyazi ukuba iphepha lakho linokuba nezihloko ezininzi ngokuxhomekeke apho ufuna ukuba ziboniswe khona? Kuyinyani… Nazi izihloko ezine ezahlukeneyo onokuba nazo kwiphepha elinye kwinkqubo yakho yolawulo lomxholo.
Isihloko seTag -I-HTML eboniswe kwibhrawuza yakho kwaye ikhonjisiwe kwaye ibonisiwe kwiziphumo zokukhangela.
Isihloko Sekhasi - isihloko osinike iphepha lakho kwinkqubo yolawulo lomxholo ukuyifumana ngokulula.
Isihloko sePhepha Ngokwesiqhelo i-H1 okanye i-H2 tag ephezulu kwiphepha lakho evumela iindwendwe zakho ukuba zazi ukuba zikweliphi iphepha.
Isihloko esisityebi se-Snippet -Isihloko ofuna ukusibonisa xa abantu babelana ngephepha lakho kwiindawo zosasazo zasekuhlaleni kwaye kubonisiwe kumbono. Ukuba i-snippet esisityebi ayikho, amaqonga ezentlalo aya kuhlala esilelayo kwithegi yesihloko.
Ndihlala ndinyusa nganye yezi xa ndipapasha iphepha. Kwintlalo, ndinokunyanzelisa. Xa ndikhangela, ndifuna ukuqinisekisa ukuba ndisebenzisa amagama aphambili. Ngezihloko, ndifuna ukunika ingcaciso ngomxholo olandelayo. Kwaye ngaphakathi, ndifuna ukufumana iphepha lam ngokulula xa ndikhangela inkqubo yam yolawulo lomxholo. Kweli nqaku, siza kugxila ekuphuculeni eyakho Ithegi yetayitile yeenjini zokukhangela.
Iithegi zesihloko, ngaphandle kwamathandabuzo, zezona zinto zibalulekileyo ephepheni xa kufikwa kwisalathiso esifanelekileyo somxholo wakho wamagama ophando ofuna ukufunyanwa kuwo. Kwaye nothando lwayo yonke into seo… Nceda uhlaziye isihloko sephepha lakho lasekhaya ukusuka Ikhaya. Ndiyazibamba ngalo lonke ixesha ndibona indawo apho bangasisebenzisiyo isihloko sephepha lasekhaya! Ukhuphisana namanye amaphepha asisigidi abizwa ngeKhaya!
Bangaphi abalinganiswa abonakalisa uGoogle kwithegi yesihloko?
Ngaba uyazi ukuba ithegi yetayitile yakho ingaphezulu kweempawu ezingama-70 ezinokusetyenziswa nguGoogle Umxholo owahlukileyo kwiphepha lakho Endaweni? Kwaye ukuba ungaphezulu kweempawu ezingama-75, uGoogle uza nje ungawunanzi umxholo emva koonobumba abangama-75? Ithegi yesihloko efomathiweyo kufanelekile ukuba ibe phakathi kwama-50 nama-70 abalinganiswa. Ndidla ngokwenzela phakathi kwama-50 nama-60 oonobumba kuba ukusetsha ngefowuni kungabanciphisa abanye oonobumba.
Kwelinye icala lesikali, ndibona iinkampani ezininzi zizama ukupakisha kwaye zifaka ulwazi oluninzi olungafunekiyo okanye olubanzi kuzo tag tags. Uninzi lubeka igama lenkampani, imboni kunye nesihloko sephepha. Ukuba ubekwa kwinqanaba lakho amagama anamagama aphambili, izihloko akufuneki zibandakanye igama lenkampani yakho.
Kukho okwahlukileyo okumbalwa, ewe:
Unayo uphawu olukhulu. Ukuba ndingu ENew York Times, umzekelo, ndifuna ukuyifaka.
wena Kufuneka ulwazi lophawu kwaye ndinomxholo omkhulu. Ndihlala ndikwenza oku kunye nabathengi abancinci bezenzela igama kwaye batyale imali kakhulu kumxholo othile.
Unegama lenkampani elinjalo ibandakanya igama eliphambili elifanelekileyo. Martech Zone, umzekelo, unokufika ngokufanelekileyo ukusukela MarTech ligama elisoloko likhangelwa.
Iphepha lasekhaya Imizekelo yeeTeksi
Xa ndisebenzisa iphepha lasekhaya, ndisebenzisa le fomathi ilandelayo
amagama aphambili achaza imveliso yakho, inkonzo, okanye umzi mveliso | Igama leKhampani
Icandelo leCMO, uMcebisi, uSomlomo, uMbhali, iPodcaster | Douglas Karr
Yandisa intengiso yakho kunye noTyalo-mali kwiLifu | Highbridge
Imizekelo yeeTekethi zeGeographic Page
Phantse isinye kwisithathu sazo zonke izinto ezifunwayo kuGoogle ezinxulumene nendawo ngokwe IBlue Corona. Xa ndisebenzisa iiTekisi zesihloko sephepha lendawo, ndisebenzisa le fomathi ilandelayo:
amagama aphambili achaza iphepha | indawo ekuyo
Iinkonzo zoyilo lwe-infographic | I-Indianapolis, eIndiana
Imixholo yesihloko sePhepha lesihloko sePhepha
Xa ndisebenzisa iiTekisi zesihloko sephepha elinomxholo, ndisebenzisa le fomathi ilandelayo:
amagama aphambili achaza iphepha | icandelo okanye ishishini
UkuSebenza kwePhepha lokuSebenza | Hlawula ngokokuCofa iiNkonzo
Imibuzo isebenza ngokuKuluhlu lweeTayitile
Ungalibali ukuba abasebenzisi beinjini yokukhangela bafuna ukubhala imibuzo eneenkcukacha ngoku kwiinjini zokukhangela.
Phantse i-40% yayo yonke imibuzo yokukhangela kwi-Intanethi eMelika iqulethe amagama amabini aphambili.
Ngaphezulu kwe-80% yokukhangela kwi-Intanethi eMelika yayingamagama amathathu okanye nangaphezulu.
Ngaphezulu kwe-33% yemibuzo yokukhangela kuGoogle ngamagama angama-4 + ubude
Kule posi, uyakufumana isihloko sithi:
Uyisebenzisa kanjani i-Tag yesihloko sakho se-SEO (enemizekelo)
Abasebenzisi basebenzisa Ngubani, yintoni, ngoba, nini, njani kwimibuzo yabo yokukhangela ingaphezulu lee kunangaphambili. Ukuba nesihloko sombuzo esihambelana nombuzo wophando yeyona ndlela ilungileyo yokufumana isalathiso ngokuchanekileyo kunye nokuqhuba ukugcwala kwitrafikhi kwindawo yakho.
Zininzi ezinye iisayithi ezibhalileyo malunga neethegi zetayitile kunye Ithegi yetayitile SEO kwaye andiqinisekanga ukuba ndiya kuze ndikhuphisane nabo kuba iisayithi zabo zilawula amagama ahambelana ne-SEO. Ke, ndongeze Ngemizekelo ukuzama ukwahlula iposti yam kwaye uqhube ngakumbi ukucofa!
Akunyanzelekanga ukuba ube neentloni ngokusebenzisa oonobumba abaninzi kangangoko kunokwenzeka. Sebenzisa amagama aphambili kugxilwe kuqala, kulandele amagama abanzi ngokulandelayo, sesona senzo silungileyo.
UkuSebenza kweTag yesihloko kwiWordPress
Ukuba ukuWordPress, izixhobo ezinje nge Uluhlu lwePlagi SEO iplagi ikuvumela ukuba wenze ngokwezifiso isihloko sakho seposi kunye nesihloko sephepha lakho. Ezi zimbini zahlukile. Ngendawo yeWordPress, isihloko seposi sihlala ngaphakathi kwethegi yesihloko emzimbeni wombhalo, ngelixa isihloko sephepha lakho sisona itayiti yetayiti leyo ibanjwe ziinjini zokukhangela. Ngaphandle kweplugin ye-WordPress SEO, ezi zimbini zinokufana. Inqanaba leZibalo ikuvumela ukuba uchaze zombini… ukuze usebenzise isihloko esinyanzelayo kunye nesihloko esinde ngaphakathi kwiphepha- kodwa gcina itayitile yephepha lesihloko kubude obufanelekileyo. Kwaye ungayibona imbonakalo yayo ngokubalwa komlinganiswa:
I-60% yokukhangela kuGoogle ngoku yenziwe ngeselula ke Inqanaba leZibalo ikwabonelela ngomboniso weselfowuni (iqhosha lasekunene leselula):
Ukuba awunayo iplagi apho unokwandisa khona iziqwengana zakho ezityebileyo kwimidiya yoluntu, tag tags zihlala ziboniswa ngamaqonga eendaba ezentlalo xa wabelana ngekhonkco.
Phuhlisa isihloko esifutshane, esinyanzelayo esiqhuba ucofa! Gxila kumagama aphambili kwinto okholelwa ukuba undwendwe luya kugxila kuyo kwaye ayikho enye into. Kwaye ungalibali ukwenza njalo Lungiselela inkcazo yemeta yakho ukuqhuba umsebenzisi wakho wokukhangela ukuze ucofe.
Icebiso Pro: Emva kokupapasha iphepha lakho, jonga ukuba ulibeka njani iiveki ezimbalwa ngesixhobo esifana nesi Semrush. Ukuba ubona ukuba iphepha lakho lihlelwe kakuhle ngokudityaniswa kwamagama aphambili… phinda ubhale ithegi yakho yesihloko ukuyifanisa ngokusondeleyo (ukuba kufanelekile, kunjalo). Ndikwenza oko ngalo lonke ixesha kumanqaku am kwaye ndibukele amaxabiso onqakrazo kwiKhonkco lokuKhangela lonyuka nangakumbi!
Iphepha elichazayo ukuba awusenanto oyifunayo: Ndisebenzisa ikhonkco lam lokudibana Semrush kwaye Inqanaba leZibalo ngasentla.
tags: htmlUkulungiswaisihloko sephephaisikhundla sezibalo seoenjini yokukhangela nounSEOisihlokoabalinganiswa betayitileAmagama aphambili ethegi yetayitileubude bethegi yetayitileUkusebenza kwethegi yetayitileItayitile yetayitile etafileIthegi yetayitile seotag tagsamagama kwimibuzo yokukhangela
Ukuqonda imiceli mngeni (kunye neeNgxaki) zoYilo lwe-imeyile ye-HTML
Okt 16, 2012 ngexesha 9:34 AM
Ithegi yesihloko yeyona nto ibalulekileyo yemeta kwaye ngumba wenqanaba. Iiwebhusayithi ezininzi zenza impazamo yokuchitha le ndawo ngokusebenzisa igama lenkampani kuphela. Kufuneka isebenzise amagama angundoqo ukuchaza into ekwiphepha.
Nov 1, 2012 ngo-1:21 AM
isithuba esoyikekayo esineenkcukacha… Kwixesha elizayo, oku kunokubhekiswa kuyo njengeBhayibhile yoPhuculo lweSihloko! Kuqhwatywa izandla..
Nov 1, 2012 ngo-1:38 AM
Ithakazelelwa kakhulu @wiseStep!
Meyi 14, 2013 kwi-3: 36 PM
Andifuni ukuqhubeka nesihloko sebhlog yam emva kwesihloko sephepha lam kodwa andazi ukuba ndenze njani. Ndisebenzisa iplagi yeplagi ye-All In One Seo Pack kwaye ndiyisusile i-%blog_title% ebisemva kwe-% page_title%, ngoku ithi % page_title%. Kodwa isaqhuba. Kwi-header.php ikhowudi yesihloko, kwaye kwisihloko sephepha.php yi. Ndimele ndenze ntoni, ukuze isihloko sebhlog singaqhubeki emva kwesihloko sephepha.
Meyi 14, 2013 kwi-4: 00 PM
Ndingathumela ngokunyanisekileyo useto lwakho kwi-Plugin ye-All In One SEO Pack kwaye ufake i-Yoast SEO Plugin ye-WordPress. Ungangenisa useto apho kwaye onakho ngasentla kufuneka kusebenze.